Kungani umkhonto ujame enxebeni eMathulini? - Bayede News
ITheku nokuzenyeza ukuphala lonke utwayi lwamagama abafo
Umdonsiswano ngomgcwabo ugqamise ukuthibelana phakathi kukahulumeni, amakhosi kanye neBhodi leNgonyama Trust
INDAWO yaseMathulini ngaphansi kweNkosi uBhekizizwe Luthuli ingenye yezindawo ezigudle ugu lwesifunda sakwaZulu-Natal. Lapha abantu yize sebesebenza emadolobheni amakhulu, basabuhlonipha ubukhosi kanye nenqubo yomdabu. Umhlaba waseMathulini njengeminye eminingi kwaZulu-Natal ingaphansi kweBhodi leNgonyama Trust nelenganyelwe yiSILO. Yize kunjalo le ndawo ingaphansi kukahulumeni wendawo oholwa ngamakhansela aqokwe ngokwevoti. Lesi yisithombe esitholakala kuzo zonke izindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal.
Akumangazanga ke nxa uma kuvela izindaba ezithinta le ndawo yaseMathulini, nayilapho kukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwesizwe kanye nomndeni wakwaFynn. Yize eminye imithombo yabezindaba lolu daba ilubika njengento yamanje, iqiniso lithi lona bekuwumvuko wendulo. Ukungenelela kukahulumeni okuqale ngosuku langoMgqebelo nobekuwusuku obekumele angcwatshe ngalo uMnu uMorris Fynn yehluleka. Uma kulandelwa ukukhuluma ziningi izizathu ezenza lokho, esinye sayo wukudungeka komoya lapho sekungena khona ipolitiki yamaqembu. Okunye okuthiwa kudunge amanzi nokungabikwa kakhulu kweminye imithombo yezindaba wukutholakala kwencwadi ‘yomgunyathi’ obekuthiwa ivela ehhovisi leNgonyama Trust eMgungundlovu.
Kule ncwandi ephume mhla zi-3 kuMandulo umbhali othe ubhala egameni lesikhulu sebhodi uMnu uDuncan Pakkies, uqinisekisa ukuthi iBhodi alinankinga ekutheni kube nomgcwabo endaweni. Le ncwadi kuthiwa yafika nomndeni wakwaFynn njengobufakazi bokuthi nakanjani kumele uqhubeke umgcwabo. Nokho okushaqisayo wukuthi ngosuku olulandelayo uMnu uPakkies wabhala eyakhe incwadi eyayiphika eyokuqala. Kule ncwadi yesibili, uMnu uPakkies uyaziqhelelanisa nalokho okuthiwa kushiwo nguye encwadini yokuqala. Umbuzo lapha kubukeka kungekhona nje kuphela ukuthi izincwadi zibhalwe ngubani kepha okumqoka kakhulu wukuthi konje ngabe iNgonyama Trust iyangena yini ekungcwatshweni kwabantu. Lo mbuzo ungabuzwa nakuwo uMnyango WezouBuswa NokuBambisana okunguwo osekhaleni ngasohlangothini labakwaFynn. Kulo lonke lolu daba akuzwakali ukuthi kambe uhulumeni wasekhaya wona uthini nokunguwo phela osondelene nodaba kanjalo nongakhuluma ngodaba lwamagcwaba kulandelwa imithetho ekhona.
INkosi yesizwe icashunwe ithi yona isinganqandwa Ongangezwe Lakhe esinqumweni sayo. Isizathu salokhu wukuthi njengokusho kwakhe uMadlanduna, njengenkosi yesizwe ubheke izintaba zeSILO. Nalapha kuvela umbuzo ekuhloniphaneni kwazo zonke izinhlaka ezithintekayo odabeni lomhlaba, okunguhulumeni wesifundazwe nowendawo kanye nobukhosi bumelwe yiNgonyama Trust noma yiNkosi yesizwe. Enkulumwnei yaso eMkhosini woMhlanga sikhulume okuningi okunye kwakho kube wukubuza mayelana nokuhloniphana kwezinhlaka ezikhona ezweni.
“Umuntu wakwaZulu noma ngabe uyintombi, insizwa, umfazi noma indoda uyafundiswa ukuthi umuzi kanye nesizwe kuphathwa kanjani. Akugcini lapho ngoba uyafundiswa nokuthi khona ephethe akaphinde amukele ukuphathwa. Lokhu kuqala kimi engiyiNkosi yenu. Bonke laba enibaqokile ngevoti lenu ngiyabahlonipha ngokwezikhundla zabo futhi nani nginiyala ukuthi nenze njalo. Ngikwenza lokho ngazi kamhlophe ukuthi okwabo ukuphatha ngokweminyaka emihlanu, kanti lokhu engikukho kungunaphakade. Khona lapho ngiyabanika indawo yabo. Umbuzo uthi ngabe bona bayakwenza yini lokho? Bayasihlonipha yini iSihlalo, bayangihlonipha yini mina engihleli eSihlalweni esafungelwa ngoyihlo endulo? Ukuphendula lo mbuzo kumqoka ngoba uma ungahloniphi iSihlalo, ungahloniphi mina kusho ukuthi awumhloniphi uZulu ophilayo, osewalala naloyo osazozalwa.”
Akuyona imfihlo ukuthi kukhona ukuthibelana phakathi kweNgonyama Trust, uhulumeni (wesifundazwe nowezindawo) kanye namakhosi. Lokhu awukuzwa kuphela ngezinkulumo kepha ukubona nasezinhlelweni okubukeka sengathi ziyashayisana. Udaba lwaseMathulini lukuveze obala lokho ngoba ukube lezi zinhlaka ziyathintana ngabe asibanga nesidingo sokuba isidumbu siyoduva emakhazeni. Iqiniso lithi kukhona okukhona okumele kudlulwe kukho.
NgoLwesine loyo onguSekela Sihlalo weNgonyama Trust, uMahluleli uJerome Ngwenya ngokujutshwa yiSILO emuva kokukhala kukahulumeni ube nomhlangano nazo zonke izinhlangothi ngenhloso yokuthola isixazululo.
Nxa ulalela zonke izinhlangothi kuyabonakala ukuthi konke lokhu bekungenaso isidingo, bekudinga nje ukuba bonke abathintekayo bazikhumbuze ngesisho sakudala esithi: ‘Injobo enhle ithungelwa ebandla’.
IBAYEDE iye koshicilelwa umhlangano wokuxazulula lolu daba usuchithekile njengoba abameli bomndeni wakwaFynn bedlulisele udaba enkantolo. Landela ukusuka nokuhlala kwecala kusasa ekhasini leBayede news kuFacebook.
Bayede News Sep 12, 2015